Kusongwa unyaka kwaguqa iqhawe lomzabalazo - Bayede News
Kusongwa unyaka kwaguqa iqhawe lomzabalazo
U-2015 wunyaka wokushintsha isitebhu emaqenjini epolitiki
Umhlazi-5 kuZibandlela uyisikhumbuzo ngokuhamba kukaMengameli wokuqala weNingizimu Afrika ekhululekile
ESIKHATHINI esingangesonto ukusuka namuhla (ngoLwesihlanu) iNingizimu Afrika, i-Afrika nomhlaba wonke jikelele bazobe bekhumbula okwenzeka esikhathini esingangonyaka esedlule.
Ngobusuku bomhla ka-5 kuZibandlela 2013 umhlaba wabikelwa ngokusemthethweni nguMengameli wezwe ngokudlula emhlabeni kukaMengameli wokuqala weNingizimu Afrika ekhululekile, uMnu Neslon Rholihlahla Mandela. Yize iningi, ngenxa yeminyaka yakhe kanjalo nokuxineka empilweni, lase lizilindele lezi zindaba ukumenyezelwa kwazo kwaba nomunyu. UMnu Mandela wazakhela ugazi ngakwenzayo mhla ephuma ejele mhla ka-11 kuNhlolanja 1990.
Ngesikhathi lapho iningi lilindele ukuthi ukubuyisana kwemihlambi eyalanayo, abacindezeli nabacindezelwa kube lukhuni satshe, uMnu Mandela waba wubuso bokubuyisana. Ngemuva kokuthatha isikhundla sobuMengameli wokuqala omnyama kuleli uhulumeni wakhe waba ngolunjaniswa nokubuyisana phakathi kwabamnyama nabamhlophe.
Lokhu kwenza umhlaba wonke ulangazelele ukuba yingxenye yezwe elaliqala isahluko esisha. Njengoba kwakunjalo ngosuku lokufihlwa kwakhe, ngelanga lokubekwa kwakhe njengoMengameli wokuqala omengameli bamazwe ngamazwe kanye nosaziwayo babetheleke ngobuningi babo. Lesi sigomagoma somzabalazo sahlonishwa umhlaba wonke, saklonyeliswa nangendondo ye-Noble Peace Prize. Inhlangano yamazwe omhlaba i-United Nations yenza okungakaze kwenzeke ukuba iqophe usuku ngomuntu owayengumengameli.
Namuhla ngokwekhalenda le-United Nations lukhona usuku okuthiwa yi-Nelson Mandela Day nokuwusuku lapho kuqhakanjiswa khona imisebenzi nezenzo zesihe. Yize ezinye izinhlelo kulindeleke ukuba zethulwe ekuqaleni kwesonto kepha kulindeleke ukuthi uhulumeni wakuleli kanye nezindlu zamanxusa akuleli zibe nemigubho.
Kanjalo namalungu omphakathi nawo kulindeleke ukuthi enze okuthize ukukhumbula uMnu Mandela.
Bayede News Dec 4, 2014